Chii chaunofanira kuita kana yedu wifi chishandiso iine chete madhiraivha eWindows? | Kubva kuLinux
Chii chekuita kana yedu Wi-Fi chishandiso iine chete Windows madhiraivha?
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
Ndafunga kugadzirisa nyaya iyi sezvo netiweki dzeWi-Fi dzave kuve dzakakurumbira munzvimbo dzekufunda uye munzvimbo zhinji dzebasa, asi chii chekuita kana chishandiso cheWi-Fi chePC yedu chine madhiraivha chete eWindows?
Kana izvi zvikaitika kwatiri, vashandisi veLinux havafanirwe kutya, pane chishandiso chinonzi ndiswrapper icho chinobvumidza chishandiso kushanda neWindows driver.
Nzira yekuzviita uchishandisa Debian 6 uye ayo anotorwa ndeaya:
1: Isa iyo ndiswrapper
2: Kopa mafaira .INF y .SYS izvo zvinouya paCD mune dhairekitori paPC yako semuenzaniso / kumba / tu_user
3: Isa mutyairi
Wobva waongorora kuti mutyairi akaiswa nemazvo
Pakupedzisira isa mutyairi ndiswrapper
Kana paunenge uchiita uyu murairo uchipa kukanganisa uchitaura kuti hauna iyo ndiswrapper module (zvinowanzoitika kana isu tine bigmem kernel yakaiswa, zvakaitika kwandiri nguva pfupi yadarika)
Nesarudzo iyi isu tinodzosera module (kana mutyairi weiyo kernel yatiri kushandisa).
Kuti uone kuti chishandiso chiri kushanda nemazvo
uye chimwe chinhu chakadai chinofanira kuoneka pachiratidziri:
tarisa hapana kuwedzerwa zvisina waya. eth0 hapana mawadhi ekuwedzera. wlan0 IEEE 802.11bgn ESSID: kudzima / chero Maitiro: Akakwenenzverwa Nzvimbo Yekusvikira: Haisi-Yakabatana Tx-Simba = 20 dBm Edzazve muganho murefu: 7 RTS thr: off Fragment thr: off Encryption key: off Power Management: pane pan0 hapana ma waya ekuwedzera.
Zvino sezvo zvese zvanaka, isu tinoita ndiswrapper mutyairi mutoro kana system yatanga.
Kugonesa iyo isina waya interface
Iyo yekupedzisira inofanirwa kuitwa nguva dzese kana iwe ukatanga iyo system, kunze kwekunge tazviita otomatiki.
ONA: kana uine Linux X64, madhiraivha anofanirawo kuve eX64 ekuvakisa
Iyo ndiswrapper chirongwa chakagadzirirwa madhiraivha easina waya WIFI zvishandiso zvinogona kunge zviri USB kana PCI asi mune mamwe magwaro anoti izvozvowo zvinogona kuitwa kune winmodems uye nezvimwe Hardware, ini handina kuzviedza izvo uye ini ndinosiya munda iwoyo wakavhurika vaverengi.
Uye zvino kuti unakidzwe neterevhizheni isina waya, asi iwe unofanirwa kuisa zvirongwa kuti uone manetwork semuenzaniso Wifi Radar, asi icho chimwe chinyorwa.
Chinyorwa chakatorwa kubva GUTL.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Chii chekuita kana yedu Wi-Fi chishandiso iine chete Windows madhiraivha?
Mhinduro iyi ichashanda pana Wheezy futi?
Kugona chose. Neraki, kadhi rangu reWiFi harina kundipa kurwadziwa kwakanyanya, ini ndinongo shandura NetworkManager yeWicd, zvinosuwisa kuti madhiraivha haashande zvakanaka.
Kamwe chete chete pandakazofanira kuita maitiro aya, uye yaive naMandriva 2011, uye ini ndaienda nesimba.
Yangu Gumiguru 2006 Sony Vaio laptop ine switch yeWi-fi. Zvinoitika kuti switch yakadai, pane ese ari maviri Sony Vaio neToshiba mamodheru, inyonganiso inokuvara nyore uye inokuvadza yako Wi-fi. Zvakaita kuti nditambure!
Ini ndichangobva kuwana Wifi adapta, modhi DWA-125N kubva kuD-Link. Uye iyo yekubheka switch inoremadza iyo network nekutadza! Ndakatambura zvakanyanya, asi ndakawana maitiro ekugadzirisa.
Nhasi. Nekuda kweiyi Wi-fi adapter, ini ndinogona kunakidzwa neakanakisa isina waya kubatana pasina kushandisa eimba madhiraivha, sezvo iyo D-Link brand inopa madhiraivha eLinux. 🙂
Zvinonakidza, kuchengetedza iyo info kana iwe uchiida 😀 ndatenda zvikuru.
Zvakare ndakamboshandisa iyi imwe nzira kare neredhiyo 4318 izvo zviri kupokana zvishoma mune mamwe ma distros asi madhiraivhu ayo akaigamuchira aifanirwa kuenderana ne windows xp.
Iye zvino zvandinoziva zvishoma zvishoma, ini ndinongoisa firmware-b43-installer ichibatanidza kuburikidza netambo kurodha pasuru uye voila!
Hmm, izvi zvingave zvinoshanda muArch futi?
Asi ... pane wazvino HW wifi isingatsigirwe nekernel?
Mhoro! Kurumidza mubvunzo izvo zvachose zvabuda pamusoro wenyaya. Iwe unoziva here kuita yako saiti nhare inoshamwaridzika? Saiti yangu inotaridzika kusanzwisisika kana uchiona kubva kune yangu iphone. Ndiri kuyedza kutsvaga theme kana plugin inogona kukwanisa kugadzirisa iyi nyaya.
Kana uine mazano, tapota shandisa.
Pindura kuna Nila
Elav, uripi? Sezvo ini ndisina Facebook, Twitter, kana Google+, iyi ndiyo chete nzira yandaigona kufunga nezvayo kuti ndikubate.
Chinhu chisina kujairika chakangoitika kwandiri naThunar: eyelashes ake akabuda! Asi chinoshamisa ndechekuti kwekanguva (gore rapfuura) handina kugadzirisa chero chinhu pane yangu Xubuntu 12.10. Zvinonzwa kusanzwisisika, kunyanya pandinodzvanya vhiri rembeva.
Iwe unogona here kuita chinyorwa nezvazvo?
Ndatenda zvikuru uye ndinofara gore idzva.
Hahahaha, Thunar ane eyelashes here? Ohh !! Ndakanga ndisingazivi hahahaha .. Ndine urombo shamwari yangu, ndinofanira kuisa Virtual Machine kuti ndirambe ndichinyora nezve Xfce nekuti KDE yakandibata mubako raConqi uye haindibvumidze kubuda
Mhoro. Kutenda nekupindura, Elav. Hei, chimwe chinhu chinoshamisa chiri kuitika, eyelashes angu haachabudi paThunar zvakare. Uye chimwe chinhu chakakora zvakare: mu Iron browser ikozvino zvinoita kunge yekare YouTube interface ndiri muFirefox ini ndichiona iyo nyowani. Handinzwisise.
Zvakanaka, usazvidya moyo nezvandakubvunza kwauri. Ini ndinofungidzira kuti KDE iri kukuunzira iwe nyowani uye inonakidza nyika. Ini handisati ndapa mukana nekuti iyi Laptop yandinoshandisa ndeyekubva muna 2006 uye iine Xfce inoshanda senge dumwa kwandiri.
Kusvikira nguva inotevera! Ndinovimba kukuverengera zvakare munguva pfupi mune chinyorwa chitsva.
Ehe hongu, zvese zvinoshamisa, handiti? 😕
helvert camacho akadaro
mhoro ini ndiri mutsva ku linux asi ini ndinowana kukanganisa kunotevera pandinoenda kunoisa mutyairi $ sudo ndiswrapper -i net8192cu.inf
haikwanise kuvhura net8192cu.inf: Iyo faira kana dhairekitori pa /usr/sbin/ndiswrapper-1.9 mutsara 162 haipo.
Pindura kuti ubatsire camacho
Polaroid kamera ine Android